China Chlorine dioxide Mbadamba ụrọ rụpụta na rụpụta | FIZA
Chemical Aha: Mbadamba chlorine dioxide
CAS Mba.: 10049-04-4
Njirimara: chlorine dioxide mbadamba bụ transportable, na-abụghị ihe mgbawa, otu ihe mejupụtara chlorine dioxide mbadamba, ozugbo agbakwunye na otu olu mmiri, na-eme ngwa ngwa na nchekwa n'ime a na-adịgide adịgide chlorine dioxide ngwọta.
1. Nnukwu ihe ngwọta chlorine dioxide na-arụ ọrụ na saịtị.
2.Onweghị ego itinye ego ma ọ bụ inye ike maka ọgbọ achọrọ.
Ebumnuche 3.Safe tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ chlorine dioxide.
4.Simple agwakọta ntụziaka maka ndị ọkachamara na ndị na-abụghị ndị ọkachamara.
5.Aghapu ngwa ngwa n’ime mmiri oku na mmiri oyi.
6.All SY Chlorine dioxide Mbadamba bụ effervescent mbadamba na mmiri.
7.Chlorine Dioxide Mbadamba si China nwere ike iji maka 100+ ngwa.
Size na ngwugwu
1kg / nnukwu ngwugwu; 1g / mbadamba, 4g / mbadamba, 10g / mbadamba, 20g / mbadamba, 100g / mbadamba, 200g / mbadamba, ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
1. okuko, Ahia ara ure, Azu ahia
A pụrụ iji mbadamba chlorine dioxide mee ihe na toki, broiler, oyi akwa, ụlọ ọrụ breeder; na mmiri ara ehi, ehi, na anụ ụlọ; ma na-aghakwa, ebe a na-elekọta ụmụaka na ebe a na-emecha ihe iji nyere aka n'ịkwalite nsonaazụ mmepụta. Ọdịmma mmiri na ọdịdị adịghị mma nwere ike ịnwe mmetụta dị ukwuu na mmepụta na ahụike anụmanụ. Na ọnọdụ ebe mmiri maka anụ ọkụkọ nwere mmetọ, ekwesịrị ịnye ọgwụgwọ mmiri.
NA-EGO EGO EGO iji mbadamba nkume DIOXIDE
• Okuko na-a drinkingụ Water disinfection.
• na nhazi ọkụkọ / ọkụkọ ọkụkọ
• Mwepụ biofilm.
• nhicha CIP.
• Ntinye ikuku nke ikuku (mgbidi mmiri).
• Igwu / ịgba.
• Line flushing.
• Okpu okpu.
• ọka na nri ọgwụgwọ.
• General ịsa & ọcha.
FỌD OF N’IME NKP OFR CH LLỌ IOLỌ DLỌ CHLỌ CHLỌ CHLỌ CHLỌ CHLỌ N'FORLỌ N'FORLỌ N'poLỌ N'poLỌ N'poLỌ N'poLỌ.
• Ngwa ngwa ngwa ma dịkwa oke disinfectant maka usoro mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
• Na-arụ ọrụ na mbara pH dịgasị iche iche (4-10).
• Obere ihe na-emebi emebi karịa chlorine.
• effectiverịrịrịrịrịrịrị irè na ọnụego nkwụsị dị ala
• oxidizer dị ike na mmiri.
• na-ewepu biofilm na ahịrị mmiri.
• Ọ dịghị nguzobe nke chlorinating site na ngwaahịa.
2. Chlorine dioxide nwere ike iji ya na ọdọ mmiri & Spa
Chlorine dioxide nwere ike Ihicha ma dozie ọdọ mmiri gị, ebe ị na-ekpo ọkụ, Jacuzzi, ma ọ bụ spa. Chlorine dioxide na-ekpochapu mmiri ọdọ mmiri kpamkpam, na-ewepụ slime na biofilm site na sistemụ mgbasa, ma na-edekwa paịpụ ọcha. Ọ dakọtara na sistemụ niile. Kedu ihe ọzọ, ọ na-eme ngwa ngwa: igbu ebu, ebù na fungi na 60 sekọnd. Chebe onwe gị megide nje dị ize ndụ gụnyere legionella, giardia na cryptosporidium.
Nke gara aga: Fire Assay Cupel
Osote: Chlorine dioxide Otu Akụrụngwa ntụ ntụ
20g Chlorine Dioxide Mbadamba
Chlorine Dioxide Disinfection Mbadamba
Mbadamba Chlorine Dioxide Effervescent
Clo2 Mbadamba Chlorine dioxide